Mavhesi iwayo anotsanangura zvakanakira kuva netsika dzakanaka. Kuva neunhu hunoyemurika kunoita kuti usazozvidemba pamaitiro aunoita zvinhu.—VaGaratiya 6:7.
“Rimwe zuva ndakasangana nemumwe mukomana, uye takapanana nhamba dzefoni. Vhiki isati yapera akanga ava kutonditi ndimutumire pikicha yangu ndakapfeka bhurugwa romukati.”—Janet.
Nhamba 3 ndiyo yakanakisisa, unozvionawo sei? Pamusoro pezvo Bhaibheri rinoti: ‘Munhu akangwara anoona njodzi ohwanda, asi asina mano anoramba achienda uye otambura nokuda kwaizvozvo.’—Zvirevo 22:3, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.